Matrika Pokharel: अभिमत /वार्ता /अन्तर्वार्ता
अभिमत /वार्ता /अन्तर्वार्ता
वार्ताकार : देवेन्द्र थुम्केली
गज्जब साप्ताहिक, वर्ष-१, अंक -३५ ,साउन ३२, बुधबार २०७४
वार्ताकार : प्रकाश गुरागाईं
जनसंस्कृति त्रैमासिक, वर्ष -२, अंक -२, पूर्णाङ्क - ४, फागुन २०६७
वार्ताकार : प्रमोद धिताल
“अहिलेको साहित्य प्रचारमुखी छ, जसले साहित्यको गुणवत्तालाई किचिदिएको छ ।”
अध्यक्ष, प्रगतिशील लेखक सङ्घ, नेपाल
मातृका पोखरेल सुप्रसिद्ध कथाकार एवम् कवि हुनुहुन्छ । नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानका प्राज्ञ पोखरेल प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । काठमाडौँ प्रलेसका लागि पोखरेलसँग बालमुकुन्द कार्कीले गर्नुभएको संवादको महत्वपूर्ण अंश :
 साहित्य–लेखनतिर कसरी लाग्नुभयो ?
— साहित्यतिरको रुचिको कारणले साहित्य–लेखनतिर लागेँ । साहित्यतिर लाग्नुको मूल कारण मेरो घरको वातावरण नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । पिताजी ज्योतिष शास्त्रको विद्वान् हुनुहुन्थ्यो । त्यही कारणले पनि हामी घरमा संस्कृत साहित्यलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरिरहन्थ्यौँ । घरमा हामी दाजुभाइ र केही दिदीबहिनीले समेत ज्योतिष शिक्षा लिनैपर्ने अनिवार्यता जस्तै थियो । हामी कोही खुसीले ज्योतिष पढ्थ्यौँ, कोही बाध्यताले पढ्थ्यौँ । त्योतिष पढ्दा संस्कृत साहित्यले केही प्रभाव पा¥यो । त्यसपछिका वातावरण पनि मेरा लागि साहित्यमैत्री भयो । मेरो साहित्यिक यात्राका पृष्ठभूमिको पछिल्तिर सायद यिनै कारणहरू हुन सक्छन् । प्रगतिशील साहित्यसँग मेरो सम्बन्ध २०४१ सालपछि विराटनगरमा पढ्न गएपछि मात्र भयो ।
 तपाईंको बाल्यकालबारे नलुकाई बताइदिनुहोस् न ?
— मेरो बाल्यकाल खासै कष्टकर भएन । घरनजिक विद्यालय नभएका कारण बाल्यकालको पछिल्लो चरण घरबाहिर नै बढी बित्यो । करिब सात वर्षको उमेरपछिको समय मैले घरबाहिरै बिताएँ । स्कुले जीवन मैले उदयपुरको ठानागाउँ, रूपाटार, उदयपुरगढी, कटारी, सुनसरीको प्रकाशपुर र काठमाडौँमा बिताएँ । मेरो घर आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको कारण बाल्यकाल सहजै बित्यो ।
 साहित्य र कविको परिभाषा कसरी गर्नुहुन्छ ?
— साहित्य र कविताका बारेमा धेरैले धेरै कोणबाट परिभाषा प्रस्तुत गरेका छन् । कतिले साहित्यलाई समाजको ऐना पनि भनेका छन् । हामीले पाएका साहित्यमध्ये केही साहित्यले समाजको ऐनाको भूमिकामात्रै निर्वाह गरेका छन् भने कुनै साहित्यले त्यसभन्दा अघिल्तिर बढेर समाजलाई निर्देश पनि गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर यही समाजलाई पछि धकेल्न खोज्ने साहित्य पनि फाट्टफुट्ट लेखिएकै छन् । साहित्यले समाजलाई बाटो देखाउनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । तर, एउटा कुरा के हो भने साहित्य मानिसले प्रकट गर्ने एउटा अभिव्यक्ति हो । मानिसले प्रकट गरेका अभिव्यक्तिहरूमध्ये साहित्य सबैभन्दा उन्नत अभिव्यक्ति हो ।
कविताको बारेमा बोल्नुपर्दा, साहित्यलाई परिभाषित गरेपछि कवितालाई फरक परिभाषा दिनु साह्रै जरुरी र आवश्यक छैन । कविता साहित्यको एउटा महŒवपूर्ण विधा भएकाले कविता मानव अभिव्यक्तिको अझ उच्चतम र कलात्मक अभिव्यक्ति हो । साहित्यमा अरू विधाहरू भन्दा कविताको अभिव्यक्ति–कला केही फरक र भिन्न छ । सूर्यको किरण नपुग्ने ठाउँमा पनि कवि पुग्छ भनेर कविको प्रखर कल्पनाशक्तिलाई लिएर पहिलेका मानिसहरूले भन्ने गरेका थिए । लयात्मक भाषा र बिम्बात्मक अभिव्यक्तिका कारण कविताको परिभाषामा मानिसहरूको बढी ध्यान गएको हो । तर, कविता मानिसको सुन्दर र कलात्मक अभिव्यक्ति हो ।
 आजको नेपाली साहित्य कतातिर छ ? प्रगतिशील साहित्यबारे केही भन्नुहुन्छ ?
— अहिलेको नेपाली साहित्य प्रचारमुखी छ । प्रचार हुनु नराम्रो कुरो हो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन । तर, समस्याचाहिँ कहाँ हो भने साहित्यको गुणवत्तालाई प्रचारले किचिदिएको छ । गुणात्मक दृष्टिले कमजोर सिर्जनाहरू ठूला मिडिया र प्रचारको शक्तिले बजारमा बढी देखिएका छन् । यहाँ प्रचारको मात्र कुरो होइन, यो प्राथमिकतामा छ । दोस्रो कुरा पैसा हो । पैसा भएकाहरूले लेखेको कमजोर रचना पनि बजारमा प्राथमिकताका साथ अघिल्तिर आएको देखिन्छ । त्यसैले नेपाली साहित्यमा मैले यतिबेला एउटा सङ्कट आइरहेको देखिरहेको छु । कमजोर र समाजलाई अनुपयोगी रचनाहरू प्राथमिकताका साथ बाहिर ल्याउने काममा साम्राज्यवादीहरूको योजनाबद्ध प्रयत्न देखिन्छ । बेलाबेलामा सञ्चालन हुने विभिन्न साहित्यिक महोत्सवहरूले पनि हामीलाई यो निष्कर्षमा पु¥याएका छन् । गम्भीर लेखन र वर्तमान समयका बीचमा मैले एउटा ठूलो खाडल रहेको महसुस गरेको छु । साहित्यको वर्तमान बजार गम्भीर–लेखनमैत्री छैन । टापटिपे लेखन र विश्लेषणमा अहिलेको साहित्यिक बजार रमिरहेको छ । साहित्यका पाठकहरू कम हुँदै जानुको पछाडि पनि साहित्यप्रति बजारको यही हस्तक्षेपले गर्दा हो भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
अर्कोतिर, हामीसँग भएका र हामीले उठाउनुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई अहिलेको साहित्यले राम्रोसँग समेट्न सकिरहेको छैन । समाजमा आएको विशृङ्खलता सँगसँगै वैचारिकतामा पनि विशृङ्खलता आइरहेको छ । यो समस्या नेपाली साहित्यमा टड्कारो रूपमा देखिएको छ ।
 नेपाली प्रगतिवादी साहित्यलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
— प्रगतिवादी साहित्यको क्षेत्रमा नयाँनयाँ स्रष्टाहरूको उपस्थिति बढ्दै गइरहेको छ । स्रष्टाहरूको उपस्थिति बाक्लिएपछि हाम्रा अघिल्तिर केही चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । कथ्यमा भन्दा रूपमा र भावमा भन्दा शैलीमा अभिव्यक्त हुने क्रम बढ्दो छ । यो प्रगतिवादी साहित्यको क्षेत्रमा बढ्दै गएको नकारात्मक समस्या हो । दृष्टिकोण र विचारधारात्मक समस्याका कारण यो अवस्था आइरहेको छ । तर पनि सबै दृष्टिले नेपाली साहित्यको मूलधार प्रगतिशील साहित्य नै हो भन्न अब धेरै बेर घोत्लिरहनुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
साहित्य एवम् कलाको सामाजिक दायित्वलाई अहिलेको प्रगतिशील÷प्रगतिवादी साहित्यले माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो आइरहेको छ । यो गुनासोतर्फ भने प्रगतिवादी साहित्यले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।
 नेपालको प्रगतिशील आन्दोलन र साहित्यलाई नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । यसका चुनौती र नेतृत्वलाई कसरी अगाडि बढाउँदै लानुहुन्छ ? केही योजना बताइदिनूस् न ।
— तपाईंको यो प्रश्नको थोरै उत्तर माथिल्लो प्रश्नमा पनि गएजस्तो लाग्छ । प्रगतिशील साहित्य र साहित्यिक आन्दोलन चुनौती नै चुनौतीहरूको घेराबन्दीमा छ । मूल कुरो त हामी जनताको साहित्य लेख्ने भन्छौँ । तर, हाम्रै साहित्यलाई जनताले आफ्नो ठानेर कति पढिरहेका छन् भनेर सोचेका छैनौँ । यो हामीले प्रायः धेरै छलफल नगरेको र गर्नुपर्ने विषय हो । यथार्थको भित्र पसेर त्यसको प्रतिबिम्बन गर्न हामीले कति सक्यौँ ? यो पक्षलाई हामीले राम्ररी ध्यान पु¥याउन नसक्दा पनि हामी जनतासम्म पुग्न सक्दैनौँ । गतिशील यथार्थलाई पछ्याउनुपर्छ भनेर हामीले खूबै भन्यौँ तर त्यो गतिशील यथार्थको चुरो कुरोतिर हामीले ध्यान पु¥याउन सकेनौँ ।
चुनौतीहरूका बारेमा धेरै छलफल गर्न सकिन्छ । हाम्रै प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनभित्र एउटा द्वन्द्व छ । कलालाई छाडेर विचारलाई मात्र महŒव दिनुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ एकातिर भने अर्कोतिर विचारलाई ध्यान नदिई कलालाई मात्र अघिल्तिर राख्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि छ । आखिरमा दुवै धारणा ठिक धारणा होइनन् । ठिक ढङ्गले यिनीहरूको तालमेल मिलाउन सकियो भने मात्र उत्कृष्ट साहित्यको निर्माण हुन्छ । प्रगतिशील साहित्यमा टड्कारो देखिएको एउटा चुनौती हो यो ।
प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलनमा प्रष्ट देखिएको अर्को चुनौती विचाराधारात्मक र दृष्टिकोणमा देखिने चुनौती हो । यो चुनौती निरन्तर बढ्दो अवस्थामा छ । जसले गर्दा लेखक प्रगतिशील आन्दोलनमा छ, तर उसको लेखन कताकता भौँतारिइरहेको छ । विचार र दृष्टिकोणलाई उपेक्षा गर्ने कारण पनि यो समस्या बढ्दै गएको छ । प्रगतिशील लेखक सङ्घले यिनै चुनौतीहरूलाई ख्याल गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको छ । आवश्यकता अनुरूप वैचारिक कार्यक्रम अघि बढाएको छ भने गाउँगाउँमा जनताका बीचमा पुग्न पनि साथीहरूलाई उत्प्रेरित गरिएको छ । मकवानपुर र सिन्धुपाल्चोकका साथीहरूले योजनाबद्ध गाउँमा जाने र आफ्ना सिर्जना सुनाउने कार्य गरिरहनुभएको छ । क्रमशः अरू जिल्लाहरूले पनि तत्परता देखाउँदै छन् ।
 नेपाली वर्तमान राजनीति र साहित्यलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
— राजनीति ठीक ढङ्गले अघि बढिरहेको छैन । त्यसकारण पनि प्रगतिशील साहित्य र प्रगतिशीलहरूले नै नेतृत्व गरेको राजनीतिक सत्ताको बीचमा द्वन्द्व छ । राजनीति आदर्शबाट च्युत हुँदै गएको र साहित्यले त्यसको उद्घाटन गरेका कारण राजनीति र साहित्यका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध बन्न नसकेको हो । मैले यहाँ प्रगतिशील राजनीति र साहित्यको मात्र कुरा गरेको छु ।
 नेपालको सांस्कृतिक आन्दोलनबारे के भन्नुहुन्छ ?
— प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले तपाईंले यो प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । २००६ सालमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना भयो । त्यही आन्दोलनको जगमा शोषकवर्गप्रतिको घृणा, अन्यायमा परेका मानिसहरूप्रतिको सकारात्मक दृष्टिकोण, नारीहरूमाथि भएको थिचोमिचोप्रति सङ्घर्षको आग्रहजस्ता फरक संस्कृतिको आरम्भ भयो । माओवादी जनयुद्धताका सामन्तवर्गका बीचमा ग्रामीण सङ्घर्ष र त्यो सङ्घर्षले पैदा गरेको सकारात्मक भूमिकाले नयाँ संस्कृति निर्माणको महŒवपूर्ण कार्य ग¥यो । तर, अहिले सबै कुरा मेटिँदै गएको छ । समाजमा हिजो प्रगतिशील शक्तिले निर्माण गरेका सकारात्मक नयाँ संस्कृतिहरू लोप हुँदै गएका छन् । प्रगतिशील शक्तिले हिजोदेखि आर्जन गरेका नयाँ संस्कृतिका सुन्दर पक्षहरूलाई स्थापना गर्न जरुरी छ ।
 तपाईंले जानेको माक्र्सवादमा जातीय राज्य भनको के हो ?
— प्रगतिशील आन्दोलनमा कसैले जातीय राज्यको कुरा उठाएको छैन । पहिचानका मुद्दाहरूलाई जातीय राज्यसँग जोडेर प्रचार गर्न थालियो भने त्यसले हामीलाई ठिक ठाउँमा पु¥याउँदैन ।
 जीवन के हो ?
— धेरैले जीवनका विभिन्न परिभाषा दिएका छन् । यो धेरै ठूलो दार्शनिक प्रश्न हो । यसको एउटै छोटो उत्तर जे दिए पनि हुन्छ । तर, हामी प्रगतिशीलहरूको सामाजिक दायित्व बढी हुन्छ । सामाजिक दायित्वलाई जीवन भने पनि भयो । जीवन भनौँ, कतिले भोगाइ भन्ने गरेका छन् । यसको कुनै बनिबनाउ र मूर्त उत्तर मसँग छैन ।
साभार :- प्रगतिशील लेखक सङ्घ नेपाल, काठमाण्डू जिल्ला समितिको मुखपत्र 'प्रलेस कठमाण्डौ' - २०७३ चैतबाट
हाम्रो जलजला, विचारप्रधान मासिक, वर्ष- ६, अंक - १, पूर्णाङ्क- १८, साउन २०६४
वार्ताकार, खेम थपलिया
अन्तर्बोध त्रैमासिक, वर्ष - ९, पूर्णाङ्क - १९, माघ - चैत २०६९
अयन, साहित्य कला र संस्कृति प्रधान त्रैमासिक, वर्ष- १०,अंक -१,पूर्णाङ्क - १३ , साउन- असोज २०७०
जनमत मासिक,वर्ष - २४, पूर्णाङ्क - १२६, पुष - २०६४
कौशिकी द्वेमासिक, वर्ष- ११, अंक -२,पूर्णाङ्क - ४८ , मङ्सिर - पुस, २०६८
प्रलेस पूर्णाङ्क - २२ बाट साभार
कला र अन्तरवस्तुसहितको जनपक्षीय लेखन
प्रगतिशील साहित्य हो
कबि / कथाकार एवं अध्यक्ष, प्रलेस केन्द्रीय समिति
(मातृका पोखरेल नेपाली प्रगतिवादी साहित्यमा सुपरिचित नाम हो । वि.सं. २०४४ सालमा ‘सूर्य उदाउ अब’ भन्ने कविताबाट नेपाली साहित्यमा प्रवेश गरेका पोखरेलका हालसम्म ‘सेतो दरबारको छेउबाट (२०५६)’, ‘यात्राको एउटा दृश्य (२०६०)’, र अनुहारहरु (२०६४)’ गरि ३ वटा कविता संग्रह, ‘सन्त्रस्त आँखाहरु (२०६१)’ 'घाम झुल्किनुअघि ( २०६७ )' नामक २ कथा सङ्ग्रह र विभिन्न फुटकर कविता, लेख, समालोचना आदि प्रकाशित भइसकेका छन् । जनवादी सांस्कृतिक आन्दोलनमा लामो समयदेखि क्रियाशील पोखरेल अहिले प्रगतिशील लेखक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पोखरेलसंग समसामयिक बिषयहरुको बारेमा खोमा तरामु मगरले गरेको कुराकानीलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।)
प्रगतिशील लेखनको अहिलेको अवस्था कस्तो छ र यसको दिशा कस्तो हुनुपर्छ ?
प्रगतिशील लेखनको अहिलेको अवस्थालाई हामीले समग्र नेपाली साहित्यकै मूलधारको लेखन हो भन्ने हामीले भन्ने गरेका छौं । आश्यक प¥यो भने यो बारेमा हामी पटक पटक छलफल गर्न तयार छौं । प्रगतिशील लेखनमा नयाँ पुस्ताको उपस्थिति अत्यन्तै उत्साहप्रद छ । यसो भन्दैमा प्रगतिशील लेखनमा केही कमजोरी छैनन् भन्न खोजेको होइन । प्रगतिशील लेखनमा पनि केही प्रशस्तै कमजोरीहरु रहेका छन् । प्रगतिशील साहित्यमा सबै बिधाको समान ढंगले विकास भएको छैन । कविता र कथा प्रशस्तै लेखिएका छन् । उपन्यास पनि लेखिएकै छ । नाटक बिधा अत्यन्तै कमजोर छ । रुप पक्ष हावी हुँदा अन्तरवस्तु कमजोर हुने र अन्तरवस्तु हावी हुँदा रुप पक्ष कमजोर हुने समस्या पहिल्यै देखिको समस्या हो । हाम्रो आन्दोलनमा यो समस्या अझैसम्म राम्ररी हल हुन सकेको छैन ।
समाजमा आउने परिर्वतन सँगसँगै हामीले उठाउने बिषयहरुमा पनि परिवर्तन आउँछ । हिजो राजतन्त्र थियो । ऊ सामन्तवादको नाइके थियो । आज राजतन्त्र ढलेको छ । राजतन्त्र ढले सँगसँगै सामन्तवाद कमजोर हुने र पुँजीवाद फस्टाउने आधार तयार हुनु स्वभाविक हो । यसले गर्दा प्रगतिशील लेखनको बिषयहरु परिवर्तन हुँदै जानु स्वाभाविकै हो ।
प्रगतिशील साहित्य जनपक्षीय वा जनताको साहित्य हो । प्रगतिशील साहित्यले सामाजिक दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दछ । सामाजिक दायित्वबाट बिमुख हुने साहित्य प्रगतिशील साहित्य हुन सक्दैन । यसलाई केन्द्रमा राखेर प्रगतिशील लेखनको बिषय दिशा निर्धारण गरिनुपर्दछ ।
यहाँ विगत लामो समयदेखि कविता र कथा लेखनमा हुनुहुन्छ, पुराना र नयाँ पुस्ताको लेखनमा पाइने भिन्नता के हो ?
मेरो कविता लेखनको यात्राले साढे तीन दशकको समय लिइसकेको छ तर कथा लेखन मैले धेरैपछि मात्र सुरु गरेको हुँ । कथा लेखनमा हात हालेको पनि दुई दशक भयो । कथा र कविता लेखनमा मेरो उपस्थिति पुरानो र नयाँको बीचको पुस्ताको हो जस्तो लाग्छ । मैले कविता बिधाको लेखनमा प्रवेश गरेको समयदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तन भएको महसुस गरेको छु । तर, कथामा त्यो मात्रामा भिन्नता देख्दिनँ । मूलतः कलाको पक्षमा नयाँ आएका कविहरुले महत्वपूर्ण हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । प्रगतिशील कविता लेखनमा यो पक्ष प्रष्ट देखिन्छ । कथा लेखनमा युवा पुस्ताको उपस्थिति बढ्न सकेको छैन । केही त आएका छन् तर पर्याप्त छैनन् । नयाँ आएकाहरुले पनि कथामा नयाँ प्रयोग र खोजी गरिरहेका छन् । बिषयहरु पनि नयाँ नयाँ भएकोले नयाँ स्वादका कथा लेखिएका छन् । नेपाली समाजलाई उथलपुथल पार्ने गरि जनयुद्ध भयो र त्यसले परिवर्तनको एउटा खाका को¥यो । नेपाली कथामा यी बिषयहरु आएपनि अझै लेख्नुपर्ने धेरै पक्षहरु बाँकी छन् । पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताका स्रष्टाहरुका बीच प्रष्ट रुपमा देखिने र बुझिने गरि भिन्नता पाइन्छ ।
अहिले बजारले चर्चामा ल्याएका पुस्तकहरुको वैचारिक गुणवत्ता र स्रष्टाहरुको स्तर कस्तो पाउनु भएको छ ?
मूलतः हामीले बजार कसको हातमा छ ? भनेर बुझ्नुपर्दछ । बजार जसको हातमा छ, उनीहरुले आफ्नै अनुकूलका कृति र स्रष्टालाई चर्चामा ल्याउँछन् । एउटा कुरो के प्रष्ट छ भने सामाजिक दायित्वप्रति सचेत रहेका स्रष्टा र कृतिहरु प्रति अहिलेका ठूला भनिएका मिडियाहरु र बजार विरुद्धमा छ । त्यो हुनु स्वभाविक पनि हो । ठूला मिडियाहरु सचेतनापूर्वक स्थापना गरिएका छन् । उनीहरु आफ्नो वर्ग पक्षधरता पनि सचेत छन् । उनीहरुले बढी हल्लीखल्ली गरेर स्थापित गर्न खोजेका कृति र स्रष्टा प्रगतिवादी साहित्यलाई बल पु¥याउने पटक्कै छैनन् । त्यस्तो होस् भनेर माग गर्नु, चाहना राख्नु पनि हाम्रो बुझाईको समस्या हो । हाम्रो प्रगतिशील साहित्यकार साथीहरुको म कहिलेकाँही गुनाँसो सुन्ने गर्छु । आफ्नो वर्गकाले आफ्नो वर्गकालाई हित गर्नु स्वभाविकै हो । विचारधारामुक्त मिडियाको माग गर्नु पनि हाम्रो वैचारिक कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अहिले बजारमा हल्लाखल्ला गरिएका कृतिहरुलाई हामीले त्यसैगरि नै बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । उनीहले आफ्नो अनुहार लुकाउन कहिलेकाँही एकादुई राम्रा कृतिहरु पनि नल्याएका होइनन् । तर प्रायःजसो सोद्देश्यमूलक, समाज र जीवनको परिवर्तन चाहने कृति र कृतिका स्रष्टाहरुलाई अहिलेको ठूला मिडियाले र बजारे प्राथमिकतामा पार्दैन । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ ।
वैचारिक छलफल एवं सिर्जनात्मक गतिविधिका दृष्टिकोणले प्रलेस केन्द्रमुखी भयो भन्ने गुनासो छ, जिल्लाहरुको हकमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको हो ?
यो गुनासो अहिले देखिको होइन, पहिलेदेखि कै हो । यो गुनासोका बारेमा हामी सचेत पनि छौं । अबको देशको संघीय संरचनाले यो गुनासोलाई केही मत्थर गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ । अब प्रदेश समितिको भूमिमा आफैमा महत्वपूर्ण हुन्छ । दसौं राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बनेको यस समितिले केन्द्रभन्दा बाहिरका कार्यक्रमलाई बढ्तै महत्व दिने योजनाहरु बनाएको छ । मलाई लाग्छ, अब यो गुनासो पक्कै मत्थर हुदै जानेछ । यसपटक देखि प्रलेसले विभिन्न विभागहरु बनाएको छ । विभागहरुले विभागीय निर्णयहरु गरेका छन् । जिल्लाहरुलाई कार्यक्रम राख्न केन्द्रबाट बरोबर उत्प्रेरित गरि राखिएको छ र जिल्लाहरुमा कार्यक्रम राख्ने क्रम बढेर गएको छ ।
अहिले भाषिक–सांस्कृतिक एवं पहिचानका मुद्दाहरु लेखनमा सशक्त बनेर आएका छन् । प्रलेसले यसको मुद्दा कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?
अहिले भाषिक, सांस्कृतिक एवं पहिचानका मुद्दाहरु लेखनमा सशक्त बनेर आएका छन् । प्रगतिशील आन्दोलनभित्र पनि यो बिषयलाई हेर्ने फरक फरक धारणाहरु छन् । कतिपयले पहिचानको मुद्दाले प्रगतिवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ भनेर तर्क पनि गरिरहेका छन् । कतिपय मुद्दा ओझेलमा परेको तर्क पनि गरिरहेकै छन् । तर, यो बिषय यतिबेला छलफलमा प्रवेश गरेको मात्र होइन, नयाँ पुस्ताका लेखनहरुको एउटा ठूलो समूहले यसभित्र समाहित भइसकेको छ । नेपालको पछिल्लो अवस्था समाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनको अवस्था पनि हो । हाम्रो आन्दोलनमा पहिचानलाई जातीय रुपमा मात्रै व्याख्या गरिएको छ । त्यसो गर्नु एउटा भूल हो । पहिचान भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक पनि हुन्छ । वर्गीय संघर्षभित्रैबाट यो मुद्दाहरुको हल खोजिनुपर्छ । वर्गसंघर्षलाई प्राथमिकतामा नराखेर पहिचानको आन्दोलनलाई मात्र केन्द्रमा राख्न खोजियो भने त्यसले माक्र्सवादी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने खतरा पनि छ । यसतर्फ हामी सबै प्रगतिशील लेखकहरु सचेत हुनुपर्दछ । नेपालमा आएका विभिन्न परिवर्तनले पहिचानको मुद्दालाई टड्कारो बिषयका रुपमा छलफलमा ल्याएपछि साहित्यमा आउनुलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । आगामी कार्यक्रमहरुमा प्रगतिशील लेखक सङ्घले प्राथमिकताका साथ यो बिषयलाई छलफलमा लैजान जरुरी छ ।
तपाई अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य हुनुहुन्छ, प्रलेसको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि । अहिले भाषामा देखिएको विवाद के हो र गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि प्रतिष्ठानमा पञ्चायती विरासत तोड्न प्रलेसको भूमिका कमजोर भएको गुनासो छ नि ?
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको सदस्य र प्रगतिशील लेखक सङ्घको अध्यक्ष दुबै हुनु विरोधाभास कुरा हो भन्ने कुरा धेरै साथीहरुलाई लागेको छ । अझ यो धारणा प्रगतिशील लेखक सङ्घको दसौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा जोडदार रुपमा उठेको थियो । मैले अहिलेसम्म कुनै समस्याको महसुस गरेको छैन । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पनि आन्दोलनबाटै आएको नेतृत्व छ । अरु साथीहरु पनि आन्दोलनबाटै आउनु भएको छ । तपाईले उठाउनु भएको जस्तो अहिले पनि त्यहाँभित्र पञ्चायती विरासत पूर्णतः कायमै छ भनेर बुझ्न थालियो भने हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौं । इतिहासलाई हेर्ने सवालमा केही फरक मान्यताहरु हाम्रा बीचमा होलान् । हामी छलफल चलाउँदै नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई पनि परिवर्तनको आभास दिने प्रयत्न गर्दैछौं । भाषाको बारेमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले आफ्नो ठोस् धारणा केही समयभित्रै ल्याउँदै छ ।
अन्त्यमा, प्रलेसको आगामी योजनाहरु के के छन् ?
हामी यही असोजको पहिलो हप्तामा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर हाम्रा कार्यक्रमको बार्षिक तालिका बनाउँदै छौं । यसका लागि सातै प्रदेशबाट प्रलेसमा साथीहरुको धारणा संकलन गर्दैछौं । प्रलेसमा अहिले विभिन्न विभागहरु बनेका छन् । तिनीहरुले पनि बैठक बसेर सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरु अघि सारेका छन् ।
प्रलेस रुपन्देही, अङ्क -२
मजदूर दैनिक , २०७३ साल जेठ २१ गते शुक्रबार
० तपाईको कथा लेखनको प्रारम्भ कहिलेदेखि भयो ?
– मेरो साहित्यतिरको पहिलो यात्रा कविता विधाबाट भएको हो । कविता लेख्न थालेको धेरैपछि मात्र मैले कथा लेख्न थालेँ । २०५१ सालमा साथी पत्रिकामा मेरो पहिलो कथा हरियो बत्ती छापिएको हो । त्यसपछि कथा साहित्यमा म निरन्तर लागिरहेको छु ।
० कुन त्यस्तो तत्त्व वा प्रेरणाले तपाईंलाई कथा लेखनतर्फ उन्मुख हुन प्रेरित तुल्यायो ?
– सुरुमा एउटा विषय मेरो मानसपटलमा आयो । त्यो विषयलाई मैले कवितामार्फत अभिव्यक्त गर्न खोजें । त्यसपछि एउटा निबन्ध लेखें र तत्कालीन पृष्ठभूमि साप्ताहिकमा छपाएँ । त्यो पनि प्रभावकारी बन्न सकेन । त्यसपछि त्यहीँ विषयवस्तु राखेर कथा लेखें । आफैलाई सन्तुष्टि मिल्यो र त्यसपछि कथा लेख्न थालें । पछिपछि मलाई के लाग्न थाल्यो भने अभिव्यक्तिका लागि कथा धेरै प्रभावकारी विधा हो ।
० तपाईंको कथा लेखनको मूल स्रोत के हो ?
– कथा लेखनको मेरो मूल स्रोत म बाँचिरहेको मेरो समाज र परिवेश हो । म त्यहीँबाट विषयहरू लिन्छु । मेरा कथाहरू समाजभन्दा बाहिर छैनन् । मेरा कथा पढ्ने पाठकले थाहा पाइहाल्छन् कि मेरा कथाहरू अनावश्यक कल्पनाबाट मुक्त छन् । म त्यस्तै दृष्टिकोण राख्दछु पनि ।
० तपार्इंको कथाका पात्रहरू प्राय: समाजका निम्न वर्ग र राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन्छन् । पात्र चयनका सन्दर्भमा कस्तो दृष्टिकोण अपनाउनुहुन्छ ?
– ठिकै भन्नुभयो । मैले सहकार्य गरिरहेका वर्गहरू तिनै हुन् । मैले जोसँग बढी घुलमिल गरिरहेको छु, मेरा कथामा स्वत: तिनै मानिसहरू आउनु स्वाभाविकै हो । अर्को कारण पनि छ, मेरा कथामा ती पात्रहरू आउनुमा । समाज रूपान्तरणका लागि सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने मानिस पनि तिनै हुन् । त्यसैले गर्दा पनि मेरा कथाहरूमा तिनै पात्रहरू आउँछन् । म साहित्यलाई पनि समाज रूपान्तरणको एउटा हतियार हो भन्ने दृष्टिकोणलाई स्वीकार गर्छु । त्यही कारणले गर्दा मेरा कथाहरूमा तिनै पात्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ
प्रस्तुत गर्दछु ।
० आफ्नो कथा लेखनमा पूर्ववर्ती प्रगतिशील कथा सर्जकहरूको प्रभाव कत्तिको महसुस गर्नुभएको छ ? प्रभाव छ भने कसको बढी रहेको ठान्नुहुन्छ ?
– मेरा पूर्ववर्ती कथाकारहरूको कथा लेखनबाट मैले प्रभाव ग्रहण गर्नु स्वाभाविकै हो । सबै नयाँ लेखकहरूले पुराना लेखकहरूबाट प्रभाव ग्रहण गर्दछन् । मेरा अग्रज कथाकारहरूबाट मैले प्रशस्तै प्रभाव ग्रहण गरेको छु । प्रगतिशील कथाकारहरूबाट त प्रभाव र दृष्टिकोण ग्रहण गरें नै, गैरप्रगतिशील प्रशस्तै कथा स्रष्टाहरूबाट पनि मैले प्रभाव ग्रहण गरेको छु । अग्रज कथा स्रष्टाहरूको नाम लिनुपर्दा लामो सूची बन्न सक्छ ।
० केही दशकयता प्रगतिशील कथा लेखन साँघुरिँदै गएको देखिन्छ । पुराना पुस्ताले उत्साहजनक रूपमा लेखिरहेका छैनन् भने नयाँ पुस्ता पनि सम्भावनाशील देखिएका छैनन् । यसले प्रगतिशील कथा लेखन अझ खुम्चिँदै जाने स्थिति उत्पन्न नहोला र ?
– यो समस्या प्रगतिशील कथा लेखनमा मात्र होइन । समग्र कथा लेखनमा यो प्रश्न अहिले उठाउन सकिन्छ । पुराना पुस्ताका स्रष्टाहरू पनि अहिले लेखिरहेका छन् । नयाँ पुस्ताका स्रष्टाहरू पनि अहिले नआएका होइनन् । पुराना पुस्ताका माया ठकुरी, मोहनराज शर्मा, भागीरथी श्रेष्ठ, राजेन्द्र विमल, ऋषिराज बराल, दिल साहनी, हरिहर खनालहरू अहिले पनि निरन्तर रूपमा लेखिरहनुभएकै छ । नयाँ पुस्तामा पनि स्रष्टाहरू नआएका होइनन् । तर, सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । यो भयो समग्र कथा लेखनको कुरा । प्रगतिशील कथा लेखनको कुरा गर्नुपर्दा पनि यस्तैयस्तै स्थिति हो । पुराना पुस्ताका केही राम्रा कथाकारले लेख्नै छाड्नुभयो । खगेन्द्र संग्रौलाका कथाहरू पढेर मैले धेरै प्रभाव ग्रहण गरेको छु । उहाँले लेख्नै छाड्नुभयो भने पनि हुन्छ । रामहरि पौडेल, हरिगोविन्द लुइँटेल, देविका तिमिल्सिना पनि राम्रो कथा लेख्ने स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरू पनि कथा लेखनमा थाक्नुभएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर, पनि हरिहर खनाल, ऋषिराज बराल, इस्माली, दिल साहनी, पुण्यप्रसाद खरेलहरूले नयाँ पुस्तालाई झक्झकाउने गरी कथा लेखिरहनुभएको छ । नयाँ पुस्तामा पनि केही कथाकार प्रगतिशील फाँटमा आएका छन् । उनीहरू यस क्षेत्रमा कति तपस्या गर्न सक्छन्, त्यो भोलिको कुरा हो । तर मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रगतिशील साहित्यमा आएका नयाँ पुस्ताका कथा स्रष्टाहरू पुण्य कार्की, सीमा आभास, रोहित दाहाल, हीरामणि दु:खी, विवश वस्ती, हरिमाया भेटवाल, नवीन विभास, क्षितिज मगर, पुष्करराज भट्ट, नवराज रिजाल आदिले यो क्षेत्रमा निरन्तरता दिने हो भने प्रगतिशील कथा साहित्य खुम्चिँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।
० पछिल्लो पटक कुन कथा लेख्नुभयो र के थियो त्यसको विषय ?
– मैले पछिल्लो पटक लेखेको कथा म निदाएको छैन शीर्षकको कथा हो । यो गरिमालगायत विभिन्न पत्रिकामा छापियो । यो कथा मैले बुझेको र भएको अवस्थाका बीचको एउटा खाडललाई विषयवस्तु बनाएको थिएँ । कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिँदा सुकुम्बासीहरूलाई झनै बिचल्ली बनाउने जुन क्रियाकलाप गरियो, त्यो विषयलाई मैले पचाउनै सकिनँ र कथा लेखें ।
० पछिल्लो समय ककसका कथा पढिरहनुभएको छ ?
– म कथा साहित्यको लेखक मात्र होइन, एउटा राम्रो पाठक पनि हुँ । पुरानो र नयाँ पुस्ताका कथाकारहरूको कथाको अलावा हिन्दी साहित्यमा भर्खरै प्रकाशित कथाकृतिहरू पनि पढिरहेको छु । भर्खरकै कुरा गर्दा, रोहित दाहालको कथाकृतिको भूमिका लेख्नुपरेको हुँदा उहाँका कथाहरू पढिरहेको छु ।
० नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिषद् सदस्यमा रहनुभएको डेढ वर्ष भयो । त्यहाँ गद्य र आख्यान विभाग हेर्दै आउनुभएको छ । यसबीचमा विभागबाट के–कस्ता कामहरू भए ?
– नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गद्य, आख्यान विभाग मैले सम्हालेको पनि डेढ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । यो बीचमा गएको वैशाख १२ गते भूकम्पका असरका कारण पछिल्ला योजनाहरू धेरै ओझेलमा परे । त्यसबेला सम्पन्न गर्ने भनेर तय गरिएका कार्यक्रमहरू बल्ल सुरु गरिँदै छ । यो जिम्मेवारी सम्हालेपछि २०७१ मंसिरमा हेटौंडामा साठीको दशकको नेपाली उपन्यास र साठीको दशकको नेपाली कथाका विषयमा गोष्ठी सम्पन्न गरियो । २०७१ माघमा काठमाडौंमा समसामयिक नेपाली लघुकथा लेखनको स्थिति र चुनौती विषयक गोष्ठी भयो । २०६१ चैतमा इलाममा समकालीन नेपाली नारी कथाकार र कथा लेखन प्रवृत्ति विषयक बृहत् गोष्ठी आयोजना गरियो । २०७२ वैशाखमा महेन्द्रनगरमा समकालीन नेपाली उपन्यासका प्रमुख प्रवृत्तिहरू विषयक कार्यपत्रात्मक गोष्ठी सम्पन्न भयो भने सोही साल जेठमा आख्यान स्रष्टाहरूलाई भूकम्पबाट प्रभावित भक्तपुरको स्थलगत अवलोकन गराइयो । त्यस्तै, २०७२ साल असोजमा उपन्यासकार डायमनशमशेर राणाको उपन्यासकारिताका बारेमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरियो र यही फागुनमा सिन्धुपाल्चोकको बाँडेगाउँमा गणतन्त्रपछिको नेपाली कथाका प्रवृत्ति विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
प्रकाशनको क्षेत्रमा प्रज्ञा आधुनिक नेपाली कथा भाग–३ मा प्रकाशित भएको छ । यसबीचमा अनुसन्धानका लागि केही विज्ञले यस विभागमार्फत केही कार्य गरिरहनुभएको छ । सामान्य रूपमा यस विभागबाट भएका मोटामोटी कामहरू यिनै हुन् ।
प्रस्तुति : विवस वस्ती
http://www.ebudhabar.com बाट साभार
25th February 2016, Thursday
उन्नत विचार र कलाबाट संयोजन गरिएका रचनालाई म उत्कृष्ट लेखन ठान्दछु ।
० मातृका पोखरेल
केही समयपछि पाण्डुलिपि पुरस्कार अन्तर्गत धवलागिरी साहित्यिक प्रतिष्ठानले मेरो तेस्रो कवितासङ्ग्रह अनुहारहरू प्रकाशित गर्दैछ । त्यसका लागि भूमिका तयार गर्दैछु । यही बीचमा कवि कृष्ण सेन इच्छुकको स्मृतिमा प्रकाशित हुने स्मृतिग्रन्थका लागि एउटा संस्मरण पनि तयार गर्नु छ । त्यसैगरी केही कथाका प्लटहरू पनि तयार छन् । तिनीहरूलाई पनि केही समय दिनु छ । प्रगतिशील लेखक सङ्घ र प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनका केही नियमित कामहरू छन् । समग्रतामा भन्नुपर्दा मैले व्यस्त बन्नुपर्ने समयको माग छ ।
प्रत्येक स्रष्टाका साहित्यलाई हेर्ने र परिभाषित गर्ने आ–आफ्नै किसिमको दृष्टिकोण हुन्छ । तपाईंको दृष्टिकोण के हो ?
साहित्यलाई चटकपूर्ण ढङ्गले परिभाषा दिने चलन पनि हामीकहाँ छ । तर पनि मानव समाजभन्दा छुट्टै अस्तित्वमा रहने र कुनै अलौकिक कुरा साहित्य होइन । मेरो विचारमा मानव समाजले विकास गरेको सबैभन्दा सर्वोत्तम र विशिष्ट अभिव्यक्ति नै साहित्य हो । यो कुरा मेरा धेरै अग्रज साहित्यकारहरूले समेत भनिसकेका छन् ।
मानव जीवनलाई परिभाषित गराउँदै समानताले युक्त र सभ्य समाजको निर्माणका लागि अघि बढ्न प्रेरणा दिने साहित्य मलाई मनपर्छ । मूलतः मलाई समाजवादी यथार्थवादी धारालाई ग्रहण गरेर सिर्जना गरिएका साहित्यहरू मन पर्छन् । लेख्य परम्परामा साहित्यको उपस्थिति अरूभन्दा भिन्न र विशिष्ट छ । उन्नत विचार र कलालाई संयोजन गरिएका रचनाहरूलाई म उत्कृष्ट लेखन ठान्दछु । कलाविहीन लेखोटमा जतिसुकै सुन्दर विचारहरू प्रस्तुत होऊन, तिनीहरूलाई साहित्यको कोटिमा राखेर प्रचार गरिनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा छ । तिनीहरूको आफ्नो ठाउँमा बेग्लै महत्व छ ।
साहित्यकारहरूको दायित्व कस्तो हुनुपर्छ ? तपाईंको विचार प्रस्ट पारिदिनुहोस् ।
देश र जनताको खुसी र दुःखभन्दा टाढा साहित्यकारहरू रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । साहित्य सिर्जनालाई स्वान्त सुखाय भन्नेहरूले पनि एउटा वर्गको पक्ष लिएकै हुन्छन् । म साहित्यमा वर्गीय पक्षधरता हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न सक्दिनँ । साहित्य वर्गीय हुने भएकोले यसले कुनै न कुनै वर्गको सेवा गर्छ । जान अन्जान नै किन नहोस् साहित्यकारहरूले पनि कुनै न कुनै वर्गको सेवा गरिरहेकै हुन्छन् । थिचिएका र शोषित वर्गलाई प्रेम गर्ने र समाजमा अग्रगति चाहने साहित्यकारहरूले त्यही अनुकूल आफ्नो सिर्जनात्मक दायित्व निर्वाह गरिरहेकै हुन्छन् । त्यसैले पनि कुनै न कुनै प्रकारले साहित्यकारहरूको समाज र वर्गप्रति आफ्नो दायित्व रहन्छ । देश, समाज र वर्गप्रति मेरो कुनै पनि दायित्व छैन भनेर यदी कसैले भन्छ भने त्यसले समाजलाई कि यथास्थितिमा राख्न चाहिरहेको छ कि प्रतिगमनतिर धकेल्न चाहिरहेको छ भनेर बुझ्े हुन्छ । समाजप्रति सबै साहित्यकारहरूको दायित्व पहिले पनि समान थिएन र पछि पनि हुने छैन । साहित्यकारहरू सबैको समान उद्देश्य कदापि हुँदैन । साहित्यकारहरूको वर्गीय भिन्नता हेरेर मात्र दायित्वको आग्रह गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
हालसालको साहित्यलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
हालसालको नेपाली साहित्य निकै उत्साहप्रद छ भन्ने मलाई लाग्छ । विचार र कला दुवै कोणबाट हेर्दा अग्रगामी विचारका वाहक लेखकहरूले नै यतिबेला स्पष्ट नेतृत्व गरिरहेका छन् । यथास्थितिको आग्रह गरेर लेख्ने, घुमाईफिराई राजतन्त्र वा सामन्तवादको पक्षमा लेख्नेहरू यतिबेला निकै कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ । माओवादीहरूको सशस्त्र विद्रोह, विभिन्न जनआन्दोलन लगायतका परिवर्तनकामी घटनाहरूका कारणले पनि साहित्यको क्षेत्रमा आइरहेको नयाँ पुस्ताले उर्जाशील बन्ने अवसर पायो । यो अवधि भित्र कथा, कविता, निबन्ध जस्ता विधाहरू धेरै फस्टाए । तर पनि उपन्यास र नाटक विधाको विकास उत्साहप्रद रूपमा हुन सकेजस्तो मलाई लाग्दैन ।
तपाईं आफू कुन–कुन साहित्यकार, चिन्तकहरूबाट प्रभावित हुनुहुन्छ ?
प्रत्यक्ष रूपमै मैले नेपालका धेरै साहित्यकारहरूबाट प्रेरणा लिने अवसर पाएको छु । अप्रत्यक्ष रूपमा भन्ने हो भने अग्रज पुुस्तामा काम गर्ने जति साहित्यकारहरूका सिर्जनाहरू अध्ययन गरियो ती सबैबाट प्रेरणा प्राप्त गर्ने नै कुरा भयो । श्यामप्रसाद शर्मा, आनन्ददेव भट्ट, पारिजात, वैरागी काइँला, निनु चापागाईं, रुद्र खरेल, डा. तुलसी भट्टराईदेखि लिएर त्योभन्दा पछिल्लो पुस्ताका स्थापित धेरै साहित्यकारहरूसँग संगठित भएरै काम गर्ने अवसर पाएको छु । कोबाट कति प्रभावित भइयो भनेर नाप्ने ठ्याक्कै गणितीय सूत्र यस क्षेत्रमा हुँदैन । अहिलेको समकालीन अवस्थामा अग्रणी पुस्तादेखि कनिष्ठ पुस्तासम्म म बरोबर सम्पर्कमा छु । म भरसक सबैका असल गुणहरूलाई आत्मसात गर्ने प्रयत्न गर्नेछु । म जजसको कार्यबाट प्रभावित भएँ ती सबै मेरा प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
तपाईंको लेखकीय जीवनको शुरूवात कसरी भयो ? र तपाईंको साहित्यिक यात्रा कुन विधाबाट सुरु भयो ? कृपया सबभन्दा पहिले प्रकाशित कुनै पनि विधाको लेख, रचना उल्लेख गर्नुहोस् ।
मैले फाट्टफुट्ट रचनाहरू विद्यार्थीकालदेखि नै लेखेको थिएँ । भानुभक्त मेमोरियलमा कक्षा आठमा पढ्दा भानुभक्तको विषयमा उपत्यकाव्यापी कविता प्रतियोगिता भएको थियो । मैले त्यहाँ भानुभक्तको सम्झ्नामा शीर्षकको एउटा कविता सुनाएको थिएँ । स्तुति शैलीमा लेखिएको त्यो छन्दोबद्ध कविता अपरिपक्व बेलाको एउटा पाइलो थियो । त्यसबेलासम्म मभित्र सामाजिक चेतनाको कुनै प्रभाव थिएन । त्यो कविताले त्यसबेला प्रथम पुरस्कार पाएको थियो । मैले त्यसबेला एउटा ठूलो शब्दकोष उपहार पाएको थिएँ । त्यो पुरस्कारले पनि मभित्र एउटा उत्साह पैदा ग¥यो । त्यसपछि पनि छन्दमा अपरिपक्व केही रचनाहरू लेखेँ । तर पनि २०४१ सालदेखि आई.ए. अध्ययन गर्न विराटनगर गएपछि अध्ययन र लेखनमा मेरो रुची बढ्न थाल्यो । विराटनगरमा हुने साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पाएसम्म कविता वाचन गर्न म कहिले पनि छुटाउँदैनथेँ । मेरो पहिलो प्रकाशित रचना चाहिँ २०४४ सालमा समीक्षा साप्ताहिकमा प्रकाशन भएको थियो । मेरो साहित्यिक यात्रा कविताबाटै सुरु भयो । पचासको दशकबाट मात्र मैले कथा लेख्न थालेको हुँ ।
तपाईंलाई कसरी साहित्य सिर्जनामा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त भयो ? बताइदिनु हुन्छ कि ?
आफ्नै बारेमा यतिबेला आएर मूल्याङ्कन गर्दा मेरो पारिवारिक वातावरण नै साहित्यिक प्रेरणाको पनि पहिलो स्रोत बन्यो जस्तो लाग्छ । मेरा पिताजी नन्दलाल पोखरेल पूर्वीय साहित्य र ज्योतिषको राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो । मानिसहरू उहाँलाई धार्मिकशास्त्र र ज्योतिषको आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा सम्मान गर्थे । सानैदेखि हामीले घरमा अनिवार्य रूपमा ज्योतिष र पूर्वीय साहित्यहरू (धर्मग्रन्थ) अध्ययन गर्नुपथ्र्यो । संस्कृतका श्लोकहरू घोकेर कण्ठस्थ पार्नुपथ्र्यो । पिताजी घर बाहिरको काममा जाँदा म धेरैजसो उहाँ सँगसँगै हिँड्थेँ । बिहान चार बजे उठेर उहाँ संस्कृतका श्लोकहरू वाचन गर्नुहुन्थ्यो । यतिबेला आएर सोच्दा ती संस्कृतका श्लोकहरूले र तिनीहरूको सङ्गीतले मलाई साहित्यिक सङ्गतमा पु¥याउन ठूलो मद्दत पु¥याएजस्तो लाग्छ । पछि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विराटनगर गएपछि साथीहरूले माक्र्सवादी साहित्यको अध्ययनमा प्रेरित गरे । यिनै घटनाक्रमहरू मेरा साहित्यिक यात्राका प्रेरणाहरू हुन् ।
साहित्यकारको रूपमा तपाईंको सही मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन ?
मैले मेरो सिर्जनयात्रालाई आफ्नो सामाजिक कर्तव्यको रूपमा बुझ्ेको छु । मसँग कर्म गर्ने हक मात्र छ । अरूबाट मूल्याङ्कनका लागि मात्र लेख्नेको प्राथमिक दायित्व देश, समाज र परिवर्तन हुन सक्दैन । यसो भनेर प्रोत्साहन र प्रेरणाको महत्वलाई मैले नकार्न खोजेको होइन । त्यसको आफ्नो ठाउँमा महŒव छ । नाम कमाउनका लागि कुनै कार्य गर्नु पनि व्यक्तिगत स्वार्थसँगै जोडिएको विषय हो । कसैले मेरो प्रशंसा मात्र गरिदेओस् भनेर लोभ पाल्नेहरूको सिर्जनात्मक प्रतिबद्धता पनि दीर्घायु हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कसले के भन्यो र कति प्रशंसा ग¥यो भनेर होइन, मैले आफ्नो कर्तव्य कति पूरा गर्न सकेँ भनेर सोच्नुपर्छ ।
साहित्य र राजनीति पूर्णत विरोधी तत्वहरू हुन् र हुनुपर्छ भनेर मान्यता राख्नेहरू हाम्रो लेखकीय जमातभित्र थुपै्रै भेटिन्छन् । यो मान्यता राख्नेहरूको मूल चाहना जनतालाई जागरुक हुनबाट टाढा राख्ने र असचेत बनाउने षड्यन्त्र हो भन्ने कुरामा अब हामीले कुनै द्विविधा लिइरहन जरुरी छैन । मैले राजनीतिलाई विचारको रूपमा नबुझने र केही विकासे नारा फलाकेर जनतालाई छक्याउँदै चुनाव जित्ने, भोटको मात्र ध्याउन्ना गर्ने भन्दा फरक राजनीतिको कुरा गर्न खोजेको हुँ । राजनीति भनेको विचार र दर्शन पनि हो । साहित्यकारहरूमा पनि कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै विचार र दर्शनको प्रभाव रहेकै हुन्छ । जान अन्जाननै किन नहोस् उनीहरूको पनि एउटा विश्व दृष्टिकोण हुन्छ । त्यो विश्व दृष्टिकोणले अन्ततः कुन वर्गको सेवा गर्ने भन्ने ठाउँमा पु¥याएरै छाड्छ । वर्तमान सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्ने कार्य साहित्यकारहरूको हुनुहुँदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसले घुमाई फिराई यथास्थितिवाद र प्रतिगमनको सेवा गरिरहेकै हुन्छ । राजनीतिक व्यक्ति जस्तै साहित्यकार पनि समाजको यौटा सचेत सदस्य र राष्ट्रको प्रबुद्ध नागरिक हो । आफू बाँचेको समाज र देशका बारेमा उसले पनि सोच्नुपर्छ । राजनीतिको जस्तै साहित्यको पनि वर्गगत सामाजिक मूल्य मान्यता हुन्छ । यी दुवै चीजहरू एउटै सामाजिक र आर्थिक आधारबाट उत्पन्न हुने दुई अधिरचना हुन् । हामीले शब्दमा अस्वीकार गरे पनि यी दुवै एक अर्काका पुरक भएर रहिरहेका हुन्छन् ।
तपाईं कुनै राजनीतिक वादबाट प्रभावित हुनुभएको छ कि छैन ? के साहित्यमा राजनीति प्रभावित हुँदैन र ?
मलाई माक्र्सवादी विश्व दृष्टिकोण सत्यको सबैभन्दा नजिक छ भन्ने लाग्छ । माक्र्सवाद आफैमा राजनीतिक विषय पनि हो । त्यसो भएपछि म पनि राजनीतिक वादबाट प्रभावित हुने नै भएँ । साहित्यमा पनि राजनीतिको जस्तो वर्ग पक्षधरता हुन्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रगतिशील साहित्यको परिभाषा के हो ?
प्रगतिवाद माक्र्सवादी सौन्दर्यशास्त्रलाई आधार बनाएर साहित्य सिर्जनाको क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको शब्द हो । प्रगतिवादले माक्र्सवादी वैज्ञानिक दर्शनलाई नै केन्द्रीय दृष्टिकोणको रूपमा अपनाउँछ । अझ् यसरी पनि भन्न सकिन्छ साहित्यिक क्षेत्रमा माक्र्सवादलाई प्रगतिवादको रूपमा बुझ्न्छि । योभन्दा प्रगतिशील साहित्यलाई केही खुकुलो रूपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । प्रगतिशील साहित्यको मूल आधार माक्र्सवाद भइरहन जरुरी छैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा शोषित र उत्पीडितहरूको पक्षमा, श्रमजीवीहरूको पक्षमा, उदयीमान वर्गको पक्षमा, अग्रगामी सोच र विचारको पक्षमा लेखिने साहित्यलाई नै प्रगतिशील साहित्यको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
तपाईंजस्तो एकजना सफल लेखक हुन के–के गुणहरू आवश्यक हुन्छन् ?
मेरो विचारमा एकजना सफल लेखक हुनको लागि नियमित लेखनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । सँगसँगै अध्ययन पनि हुनुपर्छ । यो सँगसँगै अर्को महत्वपूर्ण कुरा ऊ देश र जनताको हित चाहने हुनुपर्छ ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान लेखक कलाकारहरूको स्वतन्त्र प्रतिष्ठान हुनुुपथ्र्यो । तर त्यसो नभइ सरकारको कार्यालयजस्तो भयो । यस सम्बन्धमा यहाँको के टिप्पणी छ ?
विगतको इतिहास हेर्दा पनि के देखिन्छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सत्ताको विचारलाई पालित र पोषित गर्ने संस्था रह्यो । पञ्चायतकालमा यो संस्थाको स्थापना राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई टिकाउने संस्कृतिको निर्माण गर्नका लागि गरेका हुन् । त्यसपछि पनि यो कहिल्यै स्वतन्त्र रहन सकेन । जुन पार्टीको सरकार बन्यो त्यही पार्टी वरिपरी रहेका लेखकहरूलाई राखेर सभा र परिषद् बनाउने चलन कायमै राखियो । मलाई लाग्छ भोलि पनि त्यही हुन्छ । किनकि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले त्योभन्दा माथि उठेर सोच्ने हैसियत निर्माण गरेकै छैन । आफ्ना वरिपरीका मानिसहरूलाई जागिर खुवाउने ठाउँभन्दा फरक बनोस् भनेर कामना गर्न त सकिन्छ तर मैले देशका बौद्धिक र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको केन्द्रीय थलोको रूपमा विकसित होला भन्ने कुरामा फेरि पनि विश्वास गर्न सकिरहेको छुइनँ ।
जीवनमा कहिल्यै कठिनाई अनुभव गरी लेखकीय जीवनबाट निराश त हुनुभएको छैन ?
लेखकीय जीवनबाट निराश बन्नुपर्ने अहिलेसम्म कुनै कारण भेटेको छुइनँ ।
दिनचर्या कस्तो छ ? जीवनका समकालीन क्षणहरूबारे जानकारी दिनुहुन्छ कि ?
दिनचर्या सामान्य छ । अरू मानिसहरूले मलाई व्यस्त मानिसकै रूपमा मूल्याङ्कन गर्छन् । सिर्जनाका लागि धेरै समय छुट्याउँछु । सांगठनिक काममा समयको ठूलो हिस्सालाई छुट्याउनुपर्छ । हातमुख जोड्ने सानो जागीर छ । समयको अर्को ठूलो हिस्सा त्यहीँ खर्च हुन्छ । यतिबेलाको जीवन यसैगरी चलिरहेको छ ।
तपाईंको व्यक्तिगत र साहित्यिक जीवनका तीता, मीठा अविस्मरणीय क्षणहरू छन् भने कृपया बताइ दिनुहोस् न ।
अविस्मरणीय क्षणहरू सबैका जीवनमा केही न केही हुन्छन् जस्तो लाग्छ । ती क्षणहरूको चर्चा यतिबेला धेरै सान्दर्भिक हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
भविष्यका योजनाहरू सम्झ्ँदा अहिले आफैलाई अत्यास लाग्छ । जागीरमा जीवनलाई बाँध्नुपर्दा मभित्र प्रशस्तै आत्मपीडाहरू छन् । त्यो मेरो बाध्यता हो । देश र समाजका लागि मैले अहिले छुट्याएको समय अत्यन्तै थोरै हो भन्ने कुरामा मभित्र एउटा छटपटी छ । व्यक्तिगत जीवनलाई अझ् कटाएर सामाजिक जीवनका लागि अझ् समय थप्ने योजनामा छु । सिर्जनात्मक कार्यहरूमा आफ्नो उपस्थिति अझ्ै कमी महसुस गरिरहेको छु । एउटा उपन्यासको आरम्भ गरेर थन्क्याएर राखेको छु समयको अभावले ।
नभई नहुने अम्मल अहिलेसम्म केही छैन ।
तपाईंको चाख कस्तो किसिमको छ ? खासगरी खानपिन र साथीसङ्गती सम्बन्धमा ?
यात्रामा रमाउनु मेरो सबैभन्दा ठूलो रुची हो । मलाई एक्लो र सानो समूहभन्दा ठूलो समूहमा बस्न मन लाग्छ । दुईचारजना बसेर चौरासी व्यञ्जन खानुभन्दा धेरै मानिसहरूको समूहमा बसेर गुन्द्रुक र खस्रो भात नै बढी मीठो लाग्छ ।
रोगब्याधीले कत्तिको सताउने गर्छ ?
अहिलेसम्मलाई त्यस्तो समस्या खप्नुपरेको छैन ।
अन्तमा जनमत र पाठकहरूलाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा जनतामा चेतना जगाउन जनमत पत्रिकाको जन्म भएको थियो । नेपालको अग्रगामी परिवर्तनका लागि जनमत पत्रिकाको पनि केही थोपा पसिनाको खर्च भएको छ । जनमतलाई जन्माउँदा सुन्दर र समुन्नत नेपालको जुन आकांक्षा पालिएको थियो, त्यो नेपाल अझ्ै धेरै टाढा छ । जनमतले त्यो गौरवमय विगतलाई बिर्सनु हुँदैन । मेरा विचार र धारणाहरूलाई पाठकहरू समक्ष पु¥याउने जिम्मेवारी बोकीदिएकोमा जनमत पत्रिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
वार्ताकार:- मोहन दुवाल
जनमत, वर्ष २४, अंक ११—१२, पूर्णाङ्क १२६, २०६४ पुष, मातृका पोखरेल विशेष अंक
सचेत स्रष्टाहरूका लागि राजतन्त्र घिनलाग्दो संस्था हो
–मातृका पोखरेल, सचिव, लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च, नेपाल
चैत ३० गते त स्रष्टाहरूमाथि पनि गोली नै दागियो । स्रष्टाहरूले पनि बलिदानका लागि तयार हुने बेला आएको हो ?
अपराधिक मनोवृत्ति बोकेका मानिसहरूले राज्य संचालन गरेको बेलामा स्रष्टाहरूमाथि पनि गोली चल्नु कुनै नया“ कुरा होइन । स्रष्टाहरू समाजका सचेत वर्गहरू हुन् । समाजका अन्य वर्गहरू बलिदानका लागि तयार हु“दा स्रष्टाहरू तयार नहुने कुरै भएन । तपाईं इतिहासमै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्रष्टाहरूको भूमिका जहिल्यै पनि अग्रिम पंक्तिमै छ ।
स्रष्टाहरूमाथिको निरंकुश सत्ताको यसप्रकारको दमन चरम हतासा र पराजयको अभिव्यक्ति होइन ?
स्रष्टाहरू माथिको दमनको मात्र कुरा होइन, अहिले सरकार दमन गरेरै आफ्नो निरंकुश सत्ता लम्ब्याउन खोजिरहेको छ । निरंकुश सत्ताका आ“खामा सचेत स्रष्टाहरू पनि सत्रुका पंक्तिमै हुन्छन् । अहिलेको समयको राजतन्त्र स्वयंमा पिछडिएको चेतनाको अवशेष हो । त्यसमाथि पनि निरंकुश राजतन्त्र त सचेत मानिसहरूका लागि घिनलाग्दो संस्था हो । अबको राजतन्त्र कहिं कतै पनि जनमतको आधारमा टिक्ने साहस गर्न सक्तैन । झन्, नेपालको राजतन्त्रको मानसिकता ढुंगे युगकै छेउछाउको छ । उसको टिक्ने आधार भनेकै शस्त्रबल मात्र हो । तपाईं आफंै एकपल्ट कल्पना गर्नुस् त, नेपालको यो घिनलाग्दो राजतन्त्रको साथमा सेनाको बल नहु“दो हो, यसलाई जनताले के गरिसक्थे ?
यसले राज्य भनेको दमनकारी संयन्त्र हो भन्ने नै प्रमाणित गर्छ हैन ?
तपाईंले भनेजस्तो सिद्धान्तत, राज्य भनेको एक वर्गद्वारा अर्को वर्गको दमन गर्ने हतियार नै हो । तर अन्य कैयौं देशको जस्तो यो राज्य बहुमतद्वारा अल्पमतलाई शासन गर्ने मात्र राज्य होइन । अल्पमत पनि, औंलामा गन्न पुग्ने मान्छेहरू, उनीहरूको जुठो पुरो खाएर रमाएका द्वापर युगको चेतना बोकेका केही मान्छेहरूको सानो हिस्साले बहुमत जनतामाथि गरेको शासन हो यो ।
आखिर किन स्रष्टाहरूस“ग यो सरकार यति धेरै सन्त्रस्त छ ?
मैले माथि पनि तपाईंलाई भनिसकेको छु– नेपालमा बहुसंख्यक स्रष्टाहरू सचेत व्यक्तिको कोटीमा पर्छन् । अन्य केही थोरै यस्ता स्रष्टाहरू पनि छन्, जो दरबारको टाट्नोमा हालेको घा“स खाएर आफ्नो जीवन सार्थक भएको दुःस्वप्न देखिरहेका छन् । त्यस्ता स्रष्टाहरूस“ग राज्य सन्त्रस्त छैन । तर नेपालका बहुसंख्यक सचेत स्रष्टाहरू ‘राजतन्त्र’ भन्ने शब्दस“गै घृणा गर्छन् । त्यस्ता स्रष्टाहरूस“ग राज्य सन्त्रस्त हुनु स्वभाविक कुरा हो । राजाको प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन हुन थालेपछि वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतालगायतका तमाम आधारभूत नागरिक हकहरूमाथि धावा बोलिंदै आएको तथ्य अब सबैका सामु जगजोहर छ । यी कुराहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव स्रष्टाहरूमाथि सबैभन्दा बढि पर्छ । त्यसैले स्रष्टाहरू आन्दोलनको विकल्प देख्दैनन् । म निरंकुश सरकार स्रष्टाहरूस“ग सन्त्रस्त हुनु अस्वाभाविक देख्दिन ।
स्रष्टाहरूको आन्दोलनले व्यापकता ग्रहण गरेको हो ? मह जोडीलगायतका उत्रेछन् त आन्दोलनमा ?
नेपाली समाजको चेतना ०३६, ०४६ सालको आन्दोलनको तुलनामा धेरै माथि पुगिसकेको छ । अब आम नेपालीलाई थाहा भइसकेको छ, अलिकति चारो र सानो हड्डी पाउ“दैमा आन्दोलनलाई तुहाउनु हु“दैन । झनै स्रष्टाहरू यो विषयमा सचेत नहुने कुरै छैन । राजाको शाही सम्बोधनको घोषणा पश्चात् महजोडीलगायत धेरै चलचित्रकर्मी, साहित्यकारहरूको भेलाले आन्दोलनलाई अघि बढाउन अपिल गरिसकेको छ । स्रष्टाहरूले राजनैतिक पार्टीलगायत सबै सचेत समुदायलाई संविधानसभाभन्दा तलको कुनै पनि मागमा सम्झौता नगर्न बारम्बार सचेत गराइरहेका छन् । यतिबेला सचेततापूर्वक स्रष्टाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । धेरै जिल्लामा लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्च गठन भइरहेको छ । अब आन्दोलन जनताले चाहेको उपलब्धि प्राप्त नगरी पछाडि फर्कने अवस्थामा छैन ।
अनि हिजो राजाको कदमको पक्षमा स्वागत ¥याली निकाल्नेहरू पनि आन्दोलनमा देखिन्छन् । यो के हो ?
जनताको चेतनालाई कमजोर आ“केर पनि कतिले त्यो कार्य गरे । कतिको अवसरवादी चरित्र पनि हुनसक्छ । तर कसैले आन्दोलनमा सहयोग गर्न आयो भने हामीले उसलाई स्वागत गर्नै पर्छ । तर ऊप्रति सचेत हुनु जरुरी पनि छ । ऊ कुन उद्देश्यले आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेको छ ? ऊ आफूले आफैंलाई परिवर्तन गरेर आएको हो भने त्यो राम्रो कुरा हो । तर आन्दोलनले व्यापक रूप लिंदै जा“दा यस्तो हुने गर्छ । जनसहभागिताका लागि यसले आन्दोलनलाई फाइदै पु¥याउ“छ ।
यसले आन्दोलनमा असर त पु¥याउ“दैन ?
यस्ता व्यक्तिहरूलाई आन्दोलनको नीति निर्माण गर्ने तहमा पु¥याउनु हु“दैन । आखिर आन्दोलन, परिवर्तन कसैको पेवा पनि त होइन नि । त्यस्तो बेलामा प्रतिबद्ध र निरन्तर आन्दोलनमा लागिरहनेहरूले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हिजो राजाको कदमको समर्थन गर्नेहरू अहिले आन्दोलनमा सहभागीसम्म बन्न सक्छन् तर उनीहरूले गरेको नेतृत्व मानिसहरू स्वीकार गर्न सक्तैनन् । उनीहरू आन्दोलनमा सहभागी भए भने आन्दोलन कमजोर होइन निरंकुशतन्त्र नै कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो ठहर छ । धेरैभन्दा धेरै त्यस्ता मानिसहरूलाई आन्दोलनमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
स्रष्टाहरूले २०४६ सालमा भन्दा अझ बढी राजतन्त्रस“ग जुधिरहनु परेको छ हैन ?
०४६ सालमा भन्दा नेपाली जनताहरूको चेतना उन्नत भएर गइरहेको छ । त्यसैले पनि ०४६ सालभन्दा अहिलेको आन्दोलनको निसाना राजतन्त्र हुनु स्वाभाविक हो । नेपालमा राजतन्त्र रहुन्जेल शान्ति र राजनैतिक स्थिरता कायम हु“दैन भन्ने कुरामा सचेत नेपालीहरूको मनमा अब कतै द्विविधा छैन । त्यही कारणले गर्दा यो आन्दोलन राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनमा परिवर्तित भइरहेको छ ।
तपाईंहरू आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रमहरूलाई किन संचारमाध्यममार्फत् आन्दोलनपूर्व सार्वजनिक गरिरहनुभएको छैन ? किन स्रष्टाहरूलाई सञ्चारमार्फत् सार्वजनिक आव्हान गरिरहनुभएको छैन ? त्यसो गर्दा अझ व्यापक सहभागिता हु“दो हो ? कतिपय स्रष्टाहरूलाई आन्दोलनको कार्यक्रमकै बारेमा थाहा नहुने स्थिति छ ।
तपाईंको प्रश्नप्रति मेरो पनि सहमति छ । यसतर्फ हामी सचेत बनिरहेका छांै ।
अब आन्दोलनका कस्ता कार्यक्रमहरू आउ“दैछन् ?
आन्दोलनको माग अनुसार आगामी कार्यक्रमहरू पुनर्संयोजन गर्दै लगिनेछ । प्रकाशनका क्षेत्रमा केही गर्ने योजनाका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।
नेपाली जनताको त्याग र बलिदानका कारण आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गरिरहेको छ । यसलाई मन, बचन र कर्मले सहयोग गर्न आग्रह गर्छु । मेरा विचारहरू प्रसारित गर्ने मौका दिनु भएकोमा जनएकता साप्ताहिक र तपाईंप्रति आभारी छु ।
वार्ताकार : भोगीराज चाम्लिङ
जनएकता साप्ताहिक, २०६३ वैशाख ११ गते सोमबार
Posted by मातृका पोखरेल at 2:46 AM
Labels: अभिमत /वार्ता /अन्तर्वार्ता